Dhaawaca mane oo sidii laga baqayey ka xun – Gool FM
Dhaawaca mane oo sidii laga baqayey ka xun
Kaafi April 4, 2017
(Liverpool) 04 Abriil 2017. Liverpool waxa ay weyn doontaa xiddigeeda Sadio Mane dhawr toddobaad, sidaas waxaa laga soo xoganayaa warar si baahan loo shaaciyey iyada oo ay dhakaatiirka ay ku guul darreysteen in ay sheegaan heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca ka soo gaaray isku dhicii isaga iyo daafaca Everton Leighton Baines ee kulankii Merseyside derby.
Tababbaraha Liverpool Jurgen Klopp waxa uu rajeenayey natiijo deg deg ah oo soo baxda tijaabadiisa si loo ogaado in xiddiga uu diyaar u noqon karo kulamada soo socda ee Premier League-ga.
Sababo la xiriira bararka fuulay jilibkiisa dhakhaatiirka waxa ay awoodi waayeen in ay saaraan Iskaano sheega bal in laacibka ka qeyb qaadan karo kulamada Reds ay hardanka ugu gali doonto afarta sare.
Liverpool waxaa ka farxiyey soo laabashadii Coutinho ee toddobaadkii hore iyada oo ay hore ugu dhutisay maqnaanshihii xiddiagaha kala ah Adam Lallana iyo Jordan Henderson halka hal kulan ay badisay 7 ciyaarood intii uu Sadio Mane ku maqnaa koobkii qaramada qaarada Yurub.
Hal faa’ido oo ay waqtigan Liverpool heshay ayaa ah weeraryahanka reer Belgium oo sheegay in uu diyaar u yahay garab qabashada kooxdiisa waqtigan xasaasiga ah.
“Diyaar ayaan ahay,” mar walba waan dhihi jiray diyaar ayaan u ahay kooxda ciyaaryahan muhiim ah in aan u noqdo.
“Dhabtii waan aan aaminsanahay. Mustaqbalka uun ayaan u ahay xulasho,” hada ayaaan xulasho u yahay.
“Waxan rajeynayaa in aan qeyb weyn qaato gabagabada ololaha.”
GOOGOOSKA: Inter Milan vs Sampdoria 1-2 (Inter oo gurigeeda lagu garaacay)
Yaa ka dambeeyey in Ronaldo xirto lambarka 7-aad ee Manchester United?